Qubanaha » Door intee la’eg ayeey Dowladda Soomaaliya ku leedahay heshiiska kireynta badda ee u dhexeeya Imaaraadka & Somaliland.?
Door intee la’eg ayeey Dowladda Soomaaliya ku leedahay heshiiska kireynta badda ee u dhexeeya Imaaraadka & Somaliland.?
Wargeyska Haatuf ee ka soo baxay Magaalada Hargeysa, ayaa soo daabacay warbixin ku saabsan doorka ay ka qaadatay Dowladda Soomaaliya heshiis dhexmaray Somaliland & Dowladda Imaaraadka, kuna saabsan dhismaha saldhig milatari oo dherarkiisu yahay 80 km oo Imaaraatku ay ka dhisanayaan xeebta Berbera ee Somaliland.
Wargeysku, wuxuu tilmaamay in Dowladda Imaaraadka oo Somaliland aan u aqoonsaneyn Dowlad madax-bannaan in heshiiska ay u soo marisay Dowladda Soomaaliya ee caalamku aqoonsan yahay, waxaanna wargeysku intaa ku daray in Dawladda Somalia ay dalad u noqoneyso heshiiska Saldhiga ee ay Imaaraatku doonayaan inay la galaan Somaliland taasoo khatar weyn galinaysa madaxbanaanida iyo qaranimada Somaliland maadaama ay Dawladda Xamar iyo Imaaraatku yeelanayaan talada iyo awooda go’aaminta kama dambeysta ah ee ku taxaluqsan siyaabaha loo hirgalinayo ama mustaqbalka wax-looga baddeli karo ama looga bixi karo heshiiskaa.
Heshiiska waxaa qeyb ka ah in Dowladda Imaaraatka ay adeegsadaan ciidamo Masaari ah oo ay keenaan saldhiga cirka iyo badda ee ay rabaan inay ka sameystaan Berbara taasoo suurtogalin karta inay xoogagagaasi iyo Somalia isu kaashadaan sidii ay Somaliland u qabsan lahaayeen.
Sida wargeysku uu qoray, ujeeddada ugu weyn ee ay Imaaraatku u danaynayaan saldhiga ay Berbera ku yeeshaan waxay tahay in madaarka Berbera ay diyaaradahooda dagaalku ka duqeeyaan ciidamada ay dagaalka kula jiraan ee Xuutiyiinta Yeman isla markaana ka hortagaan ciidamada badda ee Iiraan si aanay xeebta Somaliland uga taakulaynin Xutiyiinta ay isku xulafada yihiiin. Haddaba Somaliland halista ay hahawlgalada milatari ee caynkaas ahi u soo jiidi karaan waxay tahay Xutiyiinta oo kaga jawaaba gantaalada riddada dheer oo ay ku soo ganaan Berbera iyo bartilmaameedyo kale oo ku yaala dhulka Somaliland.Xuutiyiintu waxay haystaan sawaariikhda Iskander ee dalka Iiraan lagu sameeyo ee gaadha ilaa 800 km waxaana rideyaal iyo hogaamiyeyaal ka ah saraakiil reer Iiraan.Waxa kale oo ay adeegsadaan saaruukh ka rido gaaban oo loo yaqaan Scud(Iskad).
Wargeyska waxaa kale uu sheegay in Bashe Cawil oo ah wiil uu qaba gabadha Madaxweyne Siilaanyo isaga oo isticmaalaya awoodii madaxweynaha Somaliland inuu yahay qofka kaliya ee Imaaraatka kala soo xaajooday arinta saldhiga islamarkaana isagu haatan dabada ka riixaya in heshiiska saldhiga laga ansixiyo Baarlamanka iyadoo aanay ku xirnayn wax shuruud ah oo ay Somaliland kaga faaiidaysanayso lacag Baashe ka soo galaysa mooyaane.